မောင်ဒိုင်း၏ သရော်စာများ: စွေစောင်းခေါ် နေလင်းကြောင်သည်..ဘယ်လိုကောင်လဲ..
(မနှင်းစုက မှတ်တမ်းတင်ပေးထားတာပါ။ အခု သရော်ဖို့ မအားသေးဘူး။ ဖတ်ပြီး ဆွေးနွေး၊ ဆဲဆိုနှင့်ကြဗျာ။ နောက်မှကြည့်ကျက်ရေးကြတာပေါ့။ ပါးစပ်က ဘုရား...ဘုရား...လက်က ကားယားကားယားဆိုတာ ဒီငနွား နေလင်းကြောင် ကြောင့် ထင်ပါ့။ စစ်ဖိနပ်နဲ့ မျက်နှာ ဖြတ်ကန်မယ့် နေလင်းကြောင်ကိုလည်း စိတ်မှာမှန်းပြီး မေတ္တာပို့ရအောင် ပုံကို ရှုကြပါ။ စီဘောက်ထဲက စာဖြစ်တဲ့အတွက် စာကို အောက်ဆုံးက စဖတ်ပါ။)
MgMgGyi: ကျန်တာတော့ မင်းနဲ့သိပ်မကွာပါဘူး မင်းက စွေစောင်း ဒီကောင်က ရွဲ့နေတယ်
22 Oct 07, 20:39
MgMgGyi: ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး ဇော်ငမျိုးက ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု ညဏ်ရည်ညဏ်သွေး အပိုင်းမှာ မင်းထက်အများကြီးသာတယ်
22 Oct 07, 20:36
MgMgGyi: ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့စိတ်ဓါတ်နဲ့အကျင့်ကိုတော့ စိတ်ဓါတ် ကျင့်ဝတ် ပညာ စည်းကမ်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီတပ်မတော်က လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး
MgMgGyi: မင်းဆတ်ဆတ်ထိမခံတတ်တာ (အစွယ်ပေါက်ကာစခွေးလို လိုက်ကိုက်နေတာ) ငါနားလည်ပေးနိုင်တယ် ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်
22 Oct 07, 20:34
MgMgGyi: မင်းလို စိတ်ဓါတ်မျိုးရှိတဲ့လူစားမျိုးက တပ်မတော်သားဘ၀နဲ့ မထိုက်တန်ဘူး
22 Oct 07, 20:33
MgMgGyi: ငါမြင်နေတယ် တချိန်မှာ မင်းဒုက္ခရောက်တော့မယ် စိတ်ဓါတ်၊ ကျင့်ဝတ်၊ ပညာ၊ စည်းကမ်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တပ်မတော်သားဘ၀ကိုမင်းမရထိုက်ဘူး
22 Oct 07, 20:32
MgMgGyi: ငါမြင်နေတယ် တချိန်မှာ မင်းလှလှကြီးဒုက္ခရောက်တော့မယ်
MgMgGyi: စွေစောင်း စွေစောင်း မင်းထင်တိုင်းရမ်းကားလို့ရအောင် ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ကို မင်းက ဘုရားထူးနေတာပါကွာ ဘာခံယူချက်မှရှိလို့မဟုတ်ပါဘူး
22 Oct 07, 20:30
MgMgGyi: အခုအချိန်မှာတော့ ပြည်သူလူထုကို မင်းက စော်ကားချင်တိုင်းစော်ကားထားပေါ့ကွာ နောင်တချိန်မှာ မင်းအဲဒါမျိုးတွေလုပ်လို့မရတော့ဘူး
22 Oct 07, 20:29
MgMgGyi: မျက်နှာကို စစ်ဖိနပ်နဲ့ဖြတ်ကန်မယ်တို့ မျိုးဖြုတ်ပစ်မယ်တို့ မင်းပြောရဲဦးမလား ကြည့်ကြသေးတာပေါ့
22 Oct 07, 20:28
MgMgGyi: အေးစွေစောင်း တိုင်းပြည်ရှိနေသမျှတပ်မတော်ရှိနေသလို ပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်နိုင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာလည်း တပ်မတော် ရှိနေဦးမှာပါ အဲဒီအခါမှာ မင်းခုနကပြောသလိုမျိုး မျက်နှာကို စစ်ဖ
22 Oct 07, 20:24
kwe shen: OppositEye: ကိုဝိုင်းမပြောကြပါနဲ့တော့ ဒီကောင်ကမွေး၇ာပါ ဦးနှေုာက်မပါလာဘူး
22 Oct 07, 20:22
app: year do that. don't waste public money $250
OppositEye: အရေမရမဖတ်မရ လာလာမပြောကျနဲ့ ကလေးတွေ
22 Oct 07, 20:21
OppositEye: ကဲ စာလုပ်လိုက်အုန်းမယ်ကွာ..
22 Oct 07, 20:19
OppositEye: လေးတိုးရင် ယိုင်လဲမဲ့ အယူအဆနဲ့ အငြင်းလားမပွားနဲ့
OppositEye: တပ်မတော်ဆိုတာကတော့ တိုင်းပြည်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ရှိနေမှာပါပဲကွာ..ဟားဟားဟား
22 Oct 07, 20:15
OppositEye: အခုလောလောဆယ်တော့ ခင်ဗျားလိုလူတွေ ဘေးထွက်နေလိုက်ပါ
22 Oct 07, 20:14
OppositEye: ခင်ဗျားဖြစ်ချင်တာတဲ့ ခင်ဗျားတပ်က ရဲဘော်ဆိုတဲ့ဘ၀ကို ဒီတသက်မကဘူး နောက်တစ်သက်လဲ မျှော်ကိုးမနေနဲ့တော့
22 Oct 07, 19:58
MgMgGyi: အမျိုးပါဖြုတ်ပစ်မယ် စစ်ဖိနပ်နဲ့ဖြတ်ကန်မယ်တဲ့ မင်းစိတ်ဓါတ်က မဟုတ်သေးဘူးနော် ကိုယ်ကစစ်သား လက်နက်ကိုင်ထားတယ် ကိုင်ထားတဲ့လက်နက်က ရမ်းကား အနိုင်ကျင့် ခြိမ်းချောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကွ မင်းသိလား
OppositEye: ခွေးမသားတွေ အခုချိန် စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေထုတ်ကြည့်လိုက် ..ခွေးပြေးဝက်ပြေးနဲ့ ပြည်ပပြောမဲ့ကောင်တွေ
22 Oct 07, 19:57
OppositEye: စစ်တပ်က အသက်တွေပေးထားလို့ လူဖြစ်လာရတဲ့ကောင်တွေက
MgMgGyi: လက်ခုပ်ဆိုတာ ၂ ဘက်တီးမှ မြည်တာ မင်းက လက်ခုပ်တင်မဟုတ်ဘူး အိုးစည်ဒိုးပတ်ပါ ချပြီး ၀ိုင်းထောင်စားသလိုဖြစ်နေတယ်
22 Oct 07, 19:56
OppositEye: အဲဒီတော့မှ ခြေထောက်လာဖတ်တောင်းပန်ရင် မျက်နှာကို စီးထားတဲ့ စစ်ဖိနပ်နဲ့ ဖြတ်ကန်မယ်
MgMgGyi: မင်းလုပ်နေပုံကိုက မဟုတ်သေးဘူး ဒေါသတွေကို တမင်တကာ သွားဆွပေးသလိုဖြစ်နေတယ်
22 Oct 07, 19:55
OppositEye: မုန်းစမ်းပါစေဗျာ..ကိုယ့်တာဝန်ကို ထမ်းပြီး ကိုယ့်ထမင်းကိုစားတာ..ဒီကောင်မုန်းလို့လဲ ထမင်းမငတ်သွားပါဘူး..ဒါပေမဲ့ စစ်တပ်တော့ လာမထိနဲ့ အမျိုးပါဖြုတ်ပစ်မယ်
MgMgGyi: အခုလိုမင်းက ဒိုင်ခံပြီး ဖြေရှင်းနေတော့ ပုဇွန်ခေါင်း ဟိုဟာတွေပုံချ ဆိုသလို အရာရာ မင်းခေါင်းပေါ်ကို ရောက်တော့မှာပေါ့
22 Oct 07, 19:53
MgMgGyi: OppositEye မင်းမှာလဲ ဒုက္ခဘဲကွာ လာသမျှလူကို ဘာဖြစ်လို့ပြန်ပြီး ရန်တွေ့နေမလဲ လွှတ်ထားပေးလိုက်ပေါ့ မင်းက အခုလိုပြန်ပြီး ရန်တွေ့လေ သူတို့က ကြိုက်လေဘဲ ကြာတော့ မင်းလဲ ငပွကြီးဖြစ်ပြီး လူမုန်းများမယ်
22 Oct 07, 19:51
OppositEye: လေတိုးရင် ယိုင်လဲမဲ့အယူအဆနဲ့ လာအငြင်းမပွားနဲ့
MgMgGyi: ဘယ်သူပြောတာလဲ အဲဒီစကား ငါ့ညီ OppositEye မင်းပြောမိလား အရက်သောက်ပြိုင်မလားတို့ ဘာတို့လေ ဟိုအကောင် ရူပပြောနေတာတေ
Posted by dms at 4:54 AM
၀က်စားကျင်းကော် ဆိုတဲ့ စကားဟာ စွေစောင်းလို ကောင် အတွက်ပေါ့.. ပြည်သူတွေပေးတဲ့ လခကိုစားပြီး ပြည်သူတွေကို စစ်ဖိနပ်နဲ့ကန်မယ်လေး.. အမျိုးဖြုတ်မယ်လေးနဲ့.... ကမ်းကုန်အောင်မိုက်ရိုင်းနေတယ်။
ကျွဲပါးစောင်းထပ်တီးပြမယ်.. နင်တို့ ရနေတဲ့ တလ ၂၅၀ ဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ ငွေတွေဟဲ့။ ပြည်သူတွေဆီက အခွန်ဆိုပြီးဓါးပြတိုက် ပြီး နင်တို့ကိုပြန်ပေးနေတာ။ အဲဒါကိုဦးနှောက်ရှိတဲ့ သူတွေကတော့ သိကြပါတယ်။ နင့် လို ဦးနှောက်သင်းကွတ်ခံထားရတဲ့ ကောင်တွေပဲမသိတာ... သင်းကွတ်ခံထိထားတဲ့ ဦးနှောက်တခုဟာ ဘယ်တော့မှ အကောင်းပြန်မဖြစ်တော့ဘူးသိရဲ့လား ၀က်စားကျင်းကော်ရဲ့....
according to his comment, if everybody( who become age of 18 or 20) they can go to military training everybody can understand how to shoot , how to kill the bastards, very good , let them allow to this procedure, one more thing,our people becomeasoldier or military officer , ( means not so different from ordinary ppl) everybody pay for their country their blood, their life, their sweat,alot of things we fulfill for our own country not for them( means now they r thinking only they r paying for the country , quiet wrong , sorry i would like to more & more write but........... let me stop here
ရုပ်ကိုကြည့်ပြီး .. ကျုပ်အရိုးထဲကယားလိုက်တာ ..၊ အဲဒီယားတဲ့တဲ့အရိုးနဲ့ ဒင်း နှာနုကို (&%#@)*&)ဒါပဲ .....
There has real one thing that pesent soilders in Burma is not same last war world II soilders. They are very different.Now the most of Burma soilders are afraid so much and cannot think what is wroung and what is right. They are selfish so much.
ဒီရုပ်နဲ့ ရည် ပြောမနေနဲ့ 
ဖင်ကို လျှာလျက် နင့်အသက်လို့ 
ခင်ဗျားမို့ စစ်ဖိနပ်နဲ့ဖြတ်ကန်မယ်.. စစ်တပ်မထိနဲ့ အမျိုးဖြုတ်မယ် လို့ပြောရဲတယ်..။
ခင်ဗျားတို့ ရုရှကိုပညာသင်ဖို့ပို့ပေးထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေက ပြည်သူတွေရဲ့ ချွေးနဲစာတွေဗျ အဲဒီပိုက်ဆံနဲ့ ခင်ဗျားတို့ ပညာသင်နေတာဗျ..။ ခင်ဗျား အဖေတွေ ပေးထားတာမဟုတ်ဘူး..။ ပြည်သူ့ပိုက်ဆံယူထားပြီး ပြည်သူကိုပြန်စော်ကားနေတဲ့သူ.. ခင်ဗျား ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှက်တက်ရင် လဲသေလို့ရတယ်..။ ခင်ဗျားတို့ထဲမှာ လက်နက်ရှိတိုင်း လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရမယ် မထင်နဲ့..။ သတ္တိရှိရင် လက်နက်မပါပဲနဲ့ ခင်းဗျားချရဲလို့လားဗျာ...။ ဘာလက်နက်မှမရှိတဲ့သူတွေကိုတော့ စစ်တပ်မထိနဲ့ အမျိုးဖြုတ်မယ်တို့ ဖိနပ်နဲ့ဖြတ်ကန်မယ်လို့တော့ လာမပြောပါနဲ့ဗျာ..။ လူကြားလို့မကောင်းပါဘူးဗျာ..။
ဒီကောင်တွေကသနားပါတယ်.. ရုရှားကဂွင်ဖန်ပီးဖွင့် တဲ့ စောက်စုတ်ပလုပ်သင်တန်းတွေ ကို ဒေါ်လာ ၁၅၀ ယူပီးသွားတက်နေရတာ.. ဗမာပြည်ပြန်ရောက်ရင် ဂျောင်ပဲထိုးခံထားရတာလေ.. ဘယ်တော့မှ ဗိုလ်အဆင့်ကမတက်တော့ဘူး.. ဒီကောင်တွေဘ၀က သနားဖို့ကောင်းပါတယ်.. နောက်တော့လဲမခံနိုင်လို့ ထွက်ပြေးပီးတပ်ပြေးဘ၀နဲ့ လမ်းဘေးမှာခွေးဖြစ်သွားကြတာလေ.. တော်ပါပီ.. ၀ဇီဗေဒထိတိုင်းရှနေဦးမယ်.......မပြောတော့ဘူး